NDỊ ỌKAIKPE PDP MERE KA NDỊ NA-AMỤ ỌRỤ -OTEMU – hoo!haa!!
NDỊ ỌKAIKPE PDP MERE KA NDỊ NA-AMỤ ỌRỤ -OTEMU
Legọs: Ndi ọbịa kwuru okwu na News Hub, ihe mmemme ChannelsTV, n’ụtụtụ taa bụ Tọọzdee akọwaala ndị Ọkaikpe nnọchitereanya otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP n’Ụlọikpe Nhọpụta Onyeisiala ka ndị rụrụ ọrụ ka ndị anya erughị ala.
Otu onye n’ime ha, Mazị Oghenevo Otemu, onye Ọkaikpe nọ n’Abụja sịrị na ndị Ọkaikpe nọchitereanya otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP mere ka ụmụaka. Ọ kọwara na ha agbanwughi mbọ ịkọwazi okwu ha n’ihu ụlọikpe ahụ.
“Ndị Ọkaikpe ndị PDP arụghị ọrụ kwesịrị ekwesị iji kọwazie okwu ha n’ihu ụlọikpe, ebe ha maara na ihe ụlọikpe n’ụwa nile gbaa gburugburu na-agbado ụkwụ iji nye mkpebi ya bụ n’usoro iwu(technicalities), ọ bụghị n’eziokwu.
Ọzọkwa, rụtụrụ aka na ndị Ọkaikpe ahụ welitere metụtara arụrụ ala (criminal issues) megide ndị ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche ya na megide Osote Onyeisiala Yemi Osinbajọ, onye ha boro ebubo ịzụrụ ndị so eme nhọpụta site n’ego o kere n’atụmatụ tradermoni.
O kwukwara na ọ dị mwute na ha etinyeghizi aha ndị ahụ n’okwu ahụ iji nye ha ohere ịzara ọnụ ha.
Kaosiladi, Otemu kwetara na obere oge e nyere n’iwu nhọpụta mere ka ọ bụrụ “ihe yiri ihe na agaghị ekwe omume” bụ mmadụ igbanwu akwụkwọ were kagbuo nhọpụta n’Ụlọikpe.
N’okwu nke ya, Kolade Olutekunbi, onye Ọkaikpe bi Legọs kọwara mkpesa otu PDP ahụ dịka “mkpesa na-erijughi afọ” n’ihi na, dịka o siri kwuo, okwu ha wepụtara n’ihu ụlọikpe nhọpụta ahụ bụ okwu tupu emee nhọpụta. Okwu ndị ahụ gụnyere okwu banyere ntozu agumakwụkwọ Buhari nakwa ebubo na Osinbajọ si na tradermoni were kee ndị so eme nchọpụta ego.
” Kama ịkpọlite ndị akaebe sitere n’ọgbọ nhọpụta (polling units) dị iche iche ka o siri dị n’iwu nhọpụta, ha gbadoro ụkwụ n’asịrị.
“Lezienụ ịga si ala bekee kpọta onye ọkachamara ịbịa kọọrọ anyị maka ‘server’. Ọ nọ ebea n’oge nhọpụta were hụ etu server ahụ siri rụọ ọrụ?
Higher King, onye Ọkaikpe nọ n’igwè Ọcha kọwara na mkpesa ndị PDP dịrị na mbụ kpụọ afọ n’ala ebe ọ gbadoro ụkwụ n’atụmatụ iji ụzọ ọgbara ọhụrụ bụ e voting tinyekwara ‘server’ were mee nhọpụta, n’agbanyeghị na ha ma na Onyeisiala Buharị jụrụ itinye aka n’iwu nhọpụta ọhụrụ nke kwadoro ya bụ usoro nhọpụta ọgbara ọhụrụ.
O kwuru hoo!haa! na udiri nzọhie ụkwụ ahụ pịgburu ya bụ mkpesa ndị PDP pịịị.
Previous Post: ỌGỤ OBASEKI N’OSHIOMOLE:OBASEKI ENWETALA NKWADO OONI
Next Post: SAỤT AFRỊKA NA-EGBOCHI NDỊ NAỊJIRIYA CHỌRỌ ỊLA